प्रचण्डले उतारिदिए ओलीको राष्ट्रवादको धोती, एसपीपी सम्झौतामा ओलीले गरेको रहेछन् यस्तो झेल ! |
Home समाचार प्रचण्डले उतारिदिए ओलीको राष्ट्रवादको धोती, एसपीपी सम्झौतामा ओलीले गरेको रहेछन् यस्तो झेल...
प्रचण्डले उतारिदिए ओलीको राष्ट्रवादको धोती, एसपीपी सम्झौतामा ओलीले गरेको रहेछन् यस्तो झेल !
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कार्यान्वयनको सम्झौता ओली सरकारकै पालामा भएको दाबी गरेका छन् ।
रितबहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रवादको पाखण्डी प्रचार गर्ने प्रत्यत्न भइरहेको बताए । जो आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन्, उनीहरुले नै राष्ट्रवादको हावा दिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘हिजो आज एसपीपी सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइसक्यो भनेजस्तो प्रचार गरिएको छ । यो बिल्कुल झुटो हो ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हातले त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग र हामो गठबन्धनमा भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन ।
कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन । यो घोषणा गर्न चाहन्छु । बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम २०१९ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ । यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।’- मिडिया डबली